Linux foundation inoti makambani akatotanga kuda hunyanzvi hwemakore | Linux Vakapindwa muropa
La Linux Foundation yakaburitsa iyo nyowani 2021 edition yaro yegore yakavhurwa sosi yebasa mushumo, iyo inotarisira kudzidzisa mativi ese eIT ​​kuhaya maitiro pane ano maitiro.
Uyu mushumo mutsva zvinonyatsotsanangura zvakawanda zvayakawana, achitaura kuti "gwanza retarenda raivapo denda risati rasvika rakawedzera nekuda kwekukurumidza kugashira gore -kuzvarwa kure kushanda kwave kuita kwakawanda."
Iyo 2021 edition ye "Open Source Jobs Report" yakaburitswa mukubatana pamwe edX, anotungamira mupi weMassive Open Online Courses (MOOCs). Mune ongororo iyi ye mazana maviri mamaneja ekuhaya mamaneja uye mazana manomwe evashandi yakavhurwa sosi, edX uye Linu Foundationx yakawana kuti chinodikanwa chevakanakisa sosi yakavhurwa vashandi yakakura kupfuura nakare kose.
Pamusoro pezvo, 92% yemaneja anotambudzika kuti awane yakakwana tarenda, uye mazhinji acho anotambudzikawo kuchengetedza vashandi vane ruzivo rwekuvhura sosi.
Iyo Linux Foundation vakaongorora vadzidzi kuti vaone hunyanzvi hupi, uye zvipi zvinongedzo zveCV zviwanikwa zvevanhu zvine hushamwari, zviri kudiwa zvakanyanya.
Maererano neshumo, koreji degree zvinodiwa zvinowanzodzikira, asi IT certification zvinodiwa uye / kana zvido zvinowanzo wedzera uye kekutanga, 'gore-yemuno' hunyanzvi (seKubernetes manejimendi) iva nezvakawanda zvinodiwa kupfuura hunyanzvi hweLinux hunyanzvi.
Dambudziko kumakambani nderekuti, sezvakaratidzwa ne92% yemaneja, tsvaga tarenda yakakwana, asi zvakare chengetedza tarenda iripo mukutarisana nemakwikwi anotyisa. Izvi zvinonyanya kuitika kune hunyanzvi hwekuvandudza nekushandisa 'cloud-native' kunyorera.
Cloud yemuno inosimudzira runyorwa rwehunyanzvi hunodiwa, neinopfuura 46% yemaneja ekuhaya ari kutsvaga vanhu vane hunyanzvi hweKubernetes. Uye sezvataurwa pamusoro, ino inguva yekutanga munhoroondo yeongororo iyo Foundation yakacherekedza maitiro aya.
"Talent yakavhurwa sosi iri kudiwa zvakanyanya, ichikurudzira vamwe vane ruzivo kuti vatsvage mikana mitsva vachitsvaga maneja kurwira vanodiwa," akadaro Jim Zemlin, CEO weLinux Foundation.
"Kune matarenda ari kutsvaga nzira dzakanakisa dzebasa, zviri pachena kuti chizvarwa chegore komputa, DevOps, Linux uye chengetedzo zvinopa mikana yakavimbika kwazvo," akawedzera. Muchokwadi, ongororo iyi yakaratidzawo kuti DevOps yave nzira yakajairika yekusimudzira software.
Chaizvoizvo ese akavhurika sosi nyanzvi (88%) vanotaura kuti vanoshandisa maitiro eDevOps pabasa ravo, kuwedzera kwe50% kupfuura makore matatu apfuura. Mune mamwe mazwi, iri DevOps nguva dzese.
Zvinoenderana nezvakawanikwa mushumo wegore rino, rusaruro rave dambudziko hombe. About 18% yeakavhurika sosi nyanzvi nhasi vanoti vakasarudzika kana kunzwa kusagamuchirwa munharaunda.
Ndiko kuwedzera 125% mumakore matatu apfuura. Kune zvakare musiyano uripo pakati peizvo vashandirwi zvavanofunga kuti vari kuita kana zvasvika pakusiyana uye zvinoonekwa nevashandi. Vanenge vese vashandirwi (98%) vanoti vanokurudzira zvakasiyana mukuhaya, zvichienzaniswa ne88% gore rapfuura uye 79% makore matatu apfuura.
Nekudaro, chete 76% yevashandi vanotenda kuti kambani yavo iri kuyedza kutsvaga vashandi vakasiyana siyana. Asi zviri kutaurira chaizvo kuti makambani mashoma ari kushingaira kutora vanhu vasingamiriri kubva mushumo wegore rapfuura. Kudonha uku kunoreva kuti nepo vachihaya mamaneja vanozvikorokotedza, vashoma vari kutsvaga vanhu vanomiririrwa uye vachivakurudzira kunyorera.
Chekupedzisira, iyo Sisekelo inotenda kuti sezvo makambani ari kutsvaga zvakanyanya yemahara software tarenda, avo vasingade kuhaya yakanakisa tarenda, zvisinei nedzinza, chitendero, nzvimbo, zvebonde, nezvimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Linux Foundation Inoti Mabhizinesi Akatotanga Kuda Kudhira Kwemakore Unyanzvi